बिदा नलिएको आरोपमा स्वीडेनमा एक नेपाली देश निकाला ! ::Nepali TV
You are here : Home News बिदा नलिएको आरोपमा स्वीडेनमा एक नेपाली देश निकाला !
हरेक कम्पनीका मालिकहरु आफ्ना कामदार कमभन्दा कम विदा बसुन् र बढीभन्दा बढी काम गरुन् भन्ने चाहन्छन् । तर, यही गर्दा स्वीडेनमा एक नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले देश छोड्ने आदेश दिएको छ ।
स्वीडेनको एक रेष्टुरेन्टमा कुक रहेका नेपाली कामदारलाई स्वीडेनले आफ्नो देश फर्किन आदेश दिएको हो । उनको ‘अपराध’ थियो, एक दिन पनि विदा नबसी लगातार काममा आउनू ।
तर, उनका पूर्व रोजगारदाताले भने स्विडेनको नियम अनुसार नै काम गरिरहेको बताएका थिए ।
वर्किङ भिसामा सन् २०१३ मा नेपालबाट स्विडेन आइपुगेका बिष्ट भ्यानर्सवर्गमा एक रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्छन् । एक वर्षपछि उनकी पत्नी पनि स्वीडेन आइन् ।
विष्ट भन्छन्, ‘स्विडेन धेरै राम्रो देश हो भनेर मैले सँधै सोचेँ । म यहाँ काम गर्नकै लागि आएको हुँ र यो मेरो अहिलेको घर हो ।’
तर, अक्टोबर २०१७ मा उनको परिवार भ्यानर्सबर्गमा सरेको एक वर्षपछि बिष्टको वर्क पर्मिट नविकरणको लागि दिएको निवदेनलाई स्विडिस माइग्रेसन एजेन्सीले अस्विकार गरिदियो । त्यसको निर्णयमा बिष्टलाई चार साताभित्र स्विडेन छोड्न भनिएको थियो ।
कारण थियो, बिष्टले स्टकहोममा काम गर्दा पर्याप्त वाषिर्क बिदा लिएका थिएनन् ।
उनी भने आफूलाई यस नियमबारे जानकार नभएको बताउँछन् । ‘मेरो सम्झौतामा मालिकले बिदा लिन पर्दैन भनेका थिए, त्यसको सट्टामा मलाई प्रत्येक तीन महिनामा थप रकम दिइन्थ्यो,’ बिष्टले भने, ‘नियमित बिदा लिनैपर्छ भन्ने स्वीडेन सरकारको नियमबारे हामीलाई केही पनि थाहा थिएन ।’
(द लोकलमा प्रकाशित क्याथरिन एडवर्डसको समाचारको सम्पादित अनुवाद)